တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခို်က်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်း သား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့အ စည်းများ (NCA-S EAO) က ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် “ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင် မှုမြင့် မား ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” (Workshop for Women Leadership in Peace Process- WLPP) (စတုတ္ထအကြိမ်) ကတော့ အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကလည်း တစ်ကြိမ်ထက် တစ်ကြိမ် ပို, ပိို ပြီးတော့ အားကောင်းလာ...
Terms of ReferenceBackground Aiming to bring an end to seven decades of civil war in Myanmar, eight Ethnic Armed Organizations signed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) with the Government of Myanmar on 15 October 2015. The Peace Process Working Team...
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထုုိးထားသော တုုိင်းရင်း သားလက်နက်ကုုိင်အဖွဲ့အစည်းများ (Nationwide Ceasefire Agreement-Signatories, Ethnic Armed Organization) မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးဝင်းမြင့်အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ တော်၏ သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုအတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံ တော်၏သမ္မတ သစ်အဖြစ် ကြိုဆိုကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။NCA-S EAO အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးတို့နှင့် တူညီသည့် ဘုံပန်းတိုင်ဖြစ်သည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒ ရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးတို့အတွက် သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်၏အစိုးရအဖွဲ့၊ တပ်မတော်တို့နှင့် တန်းတူရည်တူရှိသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာသည့် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအသစ်မှ...
“The Union Peace Conference can be expected to convene at late April or early May if the attitudes of holding national-level political dialogue can be realized,” said comrade Than Khe
The 7th Joint Implementation Coordination Meeting on Nationwide Ceasefire Agreement-NCA was held at the National Reconciliation and Peace Center in Nay Pyi Taw at2p.m of 28 February. “As it isapolitical dialogue, it is necessary to include...
Your respected chairman, General Yar Pyae, and JMC-U members under his leadership, invitees from JMC-S level, technical support team members and all other working members, I would like to greet you all have peaceful mind and healthy body.Our presence and...
14th Union Peace Dialogue Joint Committee meeting ကို ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ အမျိုးသားပြန််လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနမှာ ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး (LDU) တို့မှတစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့မှုအား တင်ပြခြင်း၊ UPDJC ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စ၊ အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရေးကိစ္စ၊ လူထုတွေ့ဆုံပွဲများကိစ္စ အစရှိသည့်...